Kulanka Åre ee Xisbiga Dhexe - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maud Olofsson iyo Annie Lööf oo ka qayb-gelaya kulanka xisbiga Dhexe ee Åre. Sawirle: Pontus Mattsson/Sveriges Radio.
Kulanka Åre ee Xisbiga Dhexe
La daabacay torsdag 22 september 2011 kl 14.26
Magaalada Åre ee carriga Jämtland ayaa maanta waxaa ka bilowday kulankii xubnaha xisbiga Dhexe ee Centerka. Duhurnimadii ayay khudbad halkaasi ka jeedisay Maud Olofsson, hogaamiyaha xisbiga oo qudbadeedii ugu dambeeysay u jeedisey xubnaha xisbiga. Berito oo jimce ahna ay jagada ka degi doonto kuna wareejin doonto Annie Lööf.
- Aad ayaan ugu faraxsan-ahay inaan qori isku-dhiibka awoodda iska wareejiyo, islamarkaana aan dareemayo tiiraanyo, sida ay khudbadeedii ku sheegtay Maud Olofsson, iyadoona si kooban uga war-bixisay muddadii tobanka sannadood ahayd ee ay hoggaanka soo haysay:
- Ahaanshaha hogaamiye xisbi waxa ay leedahay farxad iyo murugo labadaba. Masuuliyad ku saaran, howl aan dhammaanayn oo aanan hore u mitaali karin. Waxaan sidoo kale ka fekeray oo aan garwaaqsaday in aan maalinna ka qoomamayn waxyaabihii i soo maray muddadii aan howshaa hayay.
Sidan ayayna uga jawaabtay su'aashii ahayd is-bedelka xisbiga ku dhacay muddadii ay xukunka haysay intii aanay khudbadeeda bilaabin, mar uu su'aashaa waydiiyay suxufi ka tirsan idaacadda la iska daawado ee SVT:
- Waxaannu noqonay xisbi fikirkiisu cad yahay ee garabka midig. Waxaannu abuurnay garabka isku-tagga, awooddii ayaannu gacanta ku dhignay, waxaanu caddeeynay siyaasaddayada dabiicadda oo aannu kaga wanaagsanaanay. Waxaan sidoo kale rajeeynayaa in aannu ka geesiyowney oo noqonay xisbi ka qayb qaadan kara hoggaanka dalka iyo caalamka, sida ay sheegtay Maud Olofsson oo u warramaysay idaacadda la iska daawado ee SVT.